प्ले स्टोरमा भोलिस्ट अनुप्रयोगहरू (भोल्यूम I) | Androidsis
प्ले स्टोरमा अनौंठो अनुप्रयोगहरू (भोल्यूम I)
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू, हाम्रो बारेमा
जस्तो कि हामीले असंख्य समयहरूमा टिप्पणी गर्यौं, हामी अनुप्रयोगहरूको धेरै लामो सूचीको बारेमा जान्दछौं जुन गुगल प्ले स्टोरमा हामीसँग छ। व्यावहारिक रूपमा सबै चीजको लागी अनुप्रयोगहरु छन्। केही हाम्रो जीवनमा आधारभूत हुन्छन् र हामी उनीहरू बिना बाँच्न सक्दैनौं। उदाहरण को लागी व्हाट्सएप को लागी। यो अनुप्रयोग बिना हामी के हुन्छ?
त्यहाँ अनुप्रयोगहरू पनि छन् जुन हामी दैनिक प्रयोग गर्दछौं, जस्तै कि ईमेल खाताहरू प्रबन्धन गर्नेहरू। वा सामाजिक मिडिया अनुप्रयोगहरू। छोटकरीमा, अनुप्रयोगहरू जुन हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ, वा जसले हामीलाई एक तरीकाले वा अर्कोसँग संसारसँग जडान गर्दछ। तर ती सबै आवश्यक छैन, र केहि उपयोगी पनि छैनन्।
1 त्यहाँ बेकारका अनुप्रयोगहरू छन्?
2 त्यहाँ सशुल्क अनुप्रयोगहरू छन् जुन केहि गर्दैन।
3 र त्यहाँ नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू छन् जुन धेरै उपयोगी हुन सक्छ
त्यहाँ बेकारका अनुप्रयोगहरू छन्?
जवाफ हाँ हो। विकासकर्ताहरू अवधारणाको साथ जुन घुमाउने काम समाप्त हुँदैन। सायद एक विशिष्ट विचार क्याप्चर गर्न सक्षम नहुनुको लागि, वा उपयुक्त कार्य पूरा गर्न उपयुक्त एल्गोरिथ्म फेला पार्नको लागि। तर दुर्भाग्यवस Play Store मा त्यस्ता अनुप्रयोगहरू छन् जुन थोरै प्रयोग भएको छ।
Play Store को दुर्लभ अनुप्रयोगहरु मध्ये, र त्यो पनि एकदम थोरै सेवा गर्छ, एक बाहिर उभिन्छ। वा बरु केहि। के तपाईंले सबैभन्दा महँगो अनुप्रयोगको बारेमा सुन्नुभएको छ?। केही वर्ष पहिले एउटा अनुप्रयोग घोषणा भयो र शाब्दिक रूपमा सबै भन्दा महँगो अनुप्रयोग भनियो। यति धेरै कि यसको प्रारम्भिक मूल्य दुई सय डलर थियो।
तपाईं सोध्नु हुनेछ अनुप्रयोगले के आश्चर्यचकित गर्छ कि त्यो राशिले गर्न सक्दछ, हैन? ठिक उत्तर छ केही छैन!। ठ्याक्कै साथीहरू, त्यो अनुप्रयोग जुन कि भाग्य खर्च गर्दछ र त्यो एकदम बेकार छ। जब तपाईं यस अनुप्रयोगको लागि डाउनलोड र भुक्तानी गर्नुहुन्छ, एक आईकन हाम्रो स्मार्टफोनमा स्थापना हुन्छ जुन खोल्दा, हामीलाई एक शानदार र शानदार हीरा देखाउँदछ। यति नै।
त्यहाँ सशुल्क अनुप्रयोगहरू छन् जुन केहि गर्दैन।
हास्यास्पद कुरा यो हो कि यस अनुप्रयोगसँग १० डाउनलोडहरू थिए, र पक्कै पनि यसले अनुप्रयोगहरूलाई नेतृत्व गर्‍यो जुन उनीहरूले गर्‍यो। त्यो हो, हीराको साथ महँगो अनुप्रयोगहरू जो बेकारका छन्। यी अनुप्रयोगहरू सोच्नका लागि भुक्तानी गर्नेहरू के हुन्? मुख्य कुरा यो हो कि हाल यस अनुप्रयोगको लागत 350 XNUMX० यूरो छ र अब हीरा प्रदान गर्नुका साथै यसमा वाक्यांशहरू पनि समावेश छन् जुन तपाईंलाई प्रतिष्ठित महसुस गराउँदछ।
यसका सिर्जनाकर्ताहरूको मुख्य विचार भनेको कसैलाई चिढाउनुको अतिरिक्त यस्तो अनुप्रयोग बनाउनु थियो जसले यसलाई डाउनलोड गर्नेलाई स्थिति प्रदान गर्दछ। के तपाईं एक साधारण अहंकार भुक्तानी अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहुन्छ?। खैर, यो लाग्छ कि त्यहाँ जो त्यहाँ छन्। र यसको लागि हामीसँग अब एप्लिकेसनहरू छन् म रिच हुँ, १ 170,90०.XNUMX ० यूरोको लागि, र अन्य धेरै पन्ना र हीराको साथ। यदि यो त्यो एप्लिकेसन हो जसको लागि तपाईंले प्रतिक्षा गरिरहनु भएको थियो, हामी यहाँ लिंक दिन्छौं।
र त्यहाँ नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू छन् जुन धेरै उपयोगी हुन सक्छ
भाग्यवस, हामीसँग अनुप्रयोगहरू छन् जुन दुर्लभ भए पनि, केहि प्रयोग भएको छ। विशेष रूपमा, हामी एक एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ जुन हामीलाई डाउनलोड गर्न चाँडै नै सजिलो हुन सक्छ। पक्कै हामी सबैलाई एक अनुप्रयोग थाहा छ जुन हाम्रो कारहरू एक पटक पार्क गर्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले हामीलाई फिर्ता पुग्न मद्दत गर्दछ जहाँ हामी पागल तिर दगुर्नु हुँदैन।
तर यो अनुप्रयोग संग हामी केहि अगाडि जान्छौं। पक्कै पनि तपाईंले कहिल्यै बिहान सबेरै कार पार्क गर्नु भएको छ र दिउँसो उठाउन जब तपाईं फर्कनुहुन्छ यो पूर्ण घाममा छ। गर्मी महिनाहरूमा अझ धेरै धेरै असुविधाजनक, ठीक हो? यो अनुप्रयोग यस्तो बनाइएको हो कि यो अब तपाईंलाई नजानुहोस्।
छायाकुन अनुप्रयोगको पार्कि lotमा यसको छाया छ भनेर थाहा पाउनको लागि विकसित गरिएको अनुप्रयोगको नाम हो। यदि हामी पार्कमा काम गर्न जाँदा, बिहान सब भन्दा पहिले, यस अनुप्रयोगले हामीलाई बताउँदछ कि हामी कहाँ छौं स्थान को आधारमा केहि घण्टा अनुसार छाया हुन्छ। त्यसैले हामी गर्मी मा कूलर क्षेत्रमा, वा जाडोमा घाम लाग्ने ठाउँमा हाम्रो गाडी छोड्न सक्छौं।
साथै यो जान्नको लागि यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ कि यदि हामी किन्न चाहन्छौं कि घर घाम लाग्छ भने छतमा। वा तपाइँको बगैचामा भोज मनाउने उपयुक्त समय के हो भनेर थाहा पाउन। यो अनुप्रयोगको रूपमा जिज्ञासु नै हो। र त्यो हामीलाई अवसर मा एक हात दिन सक्नुहुन्छ।
Google Play Store को अनौंठो / अनौंठा / जिज्ञासु अनुप्रयोगहरूको अबसम्म हाम्रो भोल्यू I। हामी नयाँ संस्करणहरू दिन्छौं ताकि हामी थप अनुप्रयोगहरू खोजिरहनेछौं। के तपाई यस प्रकारको अनुप्रयोगको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ?.
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » प्ले स्टोरमा अनौंठो अनुप्रयोगहरू (भोल्यूम I)
Ulefone Power2उपहारको साथ लोड भयो
Android को लागी ह्या Hangouts्गआउट्स मे २२ मा SMS समारोह समाप्त हुनेछ